(Sawirro) Maxay ka wada hadleen Madaxweyne Geelle iyo guddoonka labada aqal ee Soomaalia? – Xeernews24
(Sawirro) Maxay ka wada hadleen Madaxweyne Geelle iyo guddoonka labada aqal ee Soomaalia?
26. August 2019 /in WARAR/NEWS /von admin
Guddoomiyaha golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka iyo guddoomiyaha Golaha Aqalka sarre ee Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa qasriga madaxtoyada Djibouti kulan kula qaatay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle.
Mas’uuliyiintan ayaa iska xogwareystay arrimaha xidhiidhka labada dal oo ah wadamo walaalo ah, iyo kaalinta dowladda Jabuuti markasta ay la garab taagantahay walaalahoodi Soomaaliyeed.
Masuuliyiintaan ayaa kulankooda uga hadlay sidii loo xoojin lahaa xidhiidhka labada Baarlamaan.
Guddoomiyaasha labada Aqal ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa booqasho rasmi ah ku jooga Caasimada Jamhuuriyada Jabuuti, halkaasoo ay kulamo kala duwan kula qaateen madaxda dalkaasi.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/08/GEL2.jpg 639 960 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-08-26 07:22:362019-08-26 07:22:36(Sawirro) Maxay ka wada hadleen Madaxweyne Geelle iyo guddoonka labada aqal ee Soomaalia?
Kornayl Caare oo sheegey inay dagaal u Diyaargaroobayaan Dhalinta reer Hadhagaala oo talaabo ku dayosho mudan soo bandhigey